धरान-१७ का युवा नेताले थाले यस्तो काम !::Hamro Koshi Awaj / awaz
धरान-१७ का युवा नेताले थाले यस्तो काम !
‘राहत कोष’ स्थापना गरे, निःशुल्क एम्बुलेन्स र औषधि उपलब्ध गराउने, विपन्नलाई खाद्यान्न दिने, सम्पर्क गर्न आग्रह
धरानः धरान-१७ का युवा राहतका लागि जुटेका छन् ।
‘राहत कोष’ नै स्थापना गरेर उनीहरुले राहत दिन लागेको जानकारी दिएका छन् । रेल्वे युथ क्लबमार्फत् कोष स्थापना गरेर राहत दिन लागिएको हो ।
धरान-१७ का युवा नरसिंह राईको संयोजकत्वमा ‘राहत कोष’ समिति स्थापना भएको छ । उनले तत्कालै राहत कोषका लागि २० हजार रुपैयाँ सहयोग दिएका छन् । शुरुमा क्लबकै सदस्यहरुबाटै आर्थिक हैसियतअनुसार सहयोग मिलेको उनले जानकारी दिए । ‘पहिला क्लबकै सदस्यबाट सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ’, उनले भने, ‘त्यसपछि अन्य सहयोगी दाताहरु गुहारिने अर्थात् आग्रह गरिनेछ ।’
गरिब, निमुखा, सुकुम्बासी, ज्यालामजदुरी गरेर खाने परिवारलाई असहज परिस्थिति उत्पन्न भएकोले उनीहरुका लागि गाउँटोल छिमेकमा बुझेर राहत वितरण गरिने उनले जानकारी दिए । उनले राहत कोषमार्फत् खाद्यान्न, औषधि वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिए । ‘अरुभन्दा पनि अहिले अति विपन्न परिवार मर्कामा छन्, खान समेत धौ धौ भइसकेको अवस्था छ, यसै कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले राहत कोष स्थापना गरेका हौं’, उनले भने, ‘आशा छ, यो कोष गरिब जनताका लागि फलदायी हुनेछ ।’
उनले कोरोनाका बिरामीलाई एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने, औषधिउपचारमा जति सकिन्छ सहयोग गर्ने ध्येय राखिएको जानकारी दिए । ‘यो विषम परिस्थितिमा धरान–१७ का अतिविपन्न, गरिब, ज्यालादारी काम गरी खाने मजदुरहरुलाई धरान–१७ रेल्वे युथ क्लबले खाद्यान्न, औषधि र निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउनेछ ।’ उनले भने ।
निःस्वार्थ सेवाको उद्देश्यका साथ कोष स्थापना गरिएको र ४३ हजार आठ सय ६० रुपैयाँ जम्मा गरेको अभियानका संयोजक युवा नेता राईले जानकारी दिए । उनले धरान १७ निवासी कोही आर्थिक रूपमा अतिविपन्न परिवार भए सम्पर्क गर्नसमेत अनुरोध गरेका छन् ।